lundi, 06 août 2018 22:46
Sambava: Fitsaram-bahoaka sahady ?
Dahalo votsotra iray andro taorian'ny nanaterana azy teo anivon’ny mpitandro ny filaminana. Tsy faly tamin’izany ny mponina tao Soavinandriana ka nandefa delegasiona tonga teny amin’ny Zandary androany maraina, fa tsy nahafa-po azy ireo ary manjavozavo ny antony nahavotsotra ity dahalo rain-dahiny ity.
Raha natao ny fisavana trano nataon'ny mpitandro filaminana taorian'ny nanamborana ity dahalo ity dia nahatratrarana akoho amam-borona maro ary lavanila tao anaty lavaka tao anaty trano izay voatokana fikajiana zavatra maloto.
Noho ireo rehetra ireo no nahatonga ny vahoaka hitroatra tamin’ity andro androany ity satria mba niezaka nisoroka ny fitsaram-bahoaka, nefa indrisy izao sahady no nitranga raha vao tapitra ny atrik’asa momba ady fisorohana izany.
lundi, 06 août 2018 17:25
Hiroshima 06 aogositra 1945 - 06 aogositra 2018: fahatsiarovana 73 taona taty aoriana
Ny marainan'ny 06 aogositra 1945 tokony tamin'ny 8ora15min, dia nalatsaky ny amerikanina tamin'ny alalan'ny fiaramanidina mpiady B-29 "Enola Gay", tao Hiroshima Japon, ny baomba atomika "Little Boy", ary telo andro taoriana dia nandatsaka baomba hafa tao Nagasaki.
Izany moa no nataon'ny amerikanina hanerena ny Japon hanaiky ho resy tamin'ny ady lehibe faharoa, ary ampisehoan'ny Amerikanina amin'ny Russie fa afaka potehiny amin'ny baomba atomika ihany koa i Russie. Sady andrana nataony amin'ny teknolojia sy fitaovam-piadiana ananany.
Olona aman'hetsiny no namoy ny ainy tamin'izany.
Notsarovana tao Hiroshima izany io maraina io, ka dia naneno ny lakolosy tamin'ny 8ora15min maraina. Nilaza ny Ben'ny Tanàna ny tsy hisian'izany intsony maneran-tany.
lundi, 06 août 2018 17:07
Iran: Midoboka ny sazin'ny Amerikanina
Nanapakevitra i Donald Trump ny hamerenana ny fahirano ataon'ny Amerikaninana amin'ny Iran manomboka anio misasak'alina.
Voakasik'izany fahirano izany ny banky, ny fividianana devise dollar, ny informatique, indostria momba ny fiarakodiasy fiaramanidina, ny famatsiana solika.
Izany moa vokatry ny fifanenjanan'ny roa tonta amin'ny fifanarahana ny fampitsaharana ny fikarohana atomika, ka Iran, namoaka ireo fitaovam-piadiany, nanao fanazaran-tena an-dranomasina, Donald Trump kosa nampitandrina fa aoka tsy hiantsy ady amin'ny Amerikanina fa hifanehatra amin'ny ady mbola tsy hitan'ny Iran hatramin'ny nisiany.
lundi, 06 août 2018 16:56
Arabie Saoudite: Noroahiny nody ny ambasadera Canada
Tsy nanaiky ny fitsabatsabahan'i Canada tamin'ny raharaha tokatranon'ny Arabie Saoudite ny mpitondra ao an-toerana, ka dia noroahiny tsy nisy atakandro ny ambasaderan'ny Canada, ary nampodiany ihany koa ny masoivohony monina any Canada.
Izany moa vokatry ny fanambarana nataon'ny minisitry ny raharaham-bahiny kanadianina nitaky ny amoahana ireo gadra noho ny fanehoan-kevitra nanakiana ny mpitondra any an-toerana momba ny zon'olombelona sy ny zon'ny vehivavy.
lundi, 06 août 2018 16:46
Fandrobana Microcred Mahajanga: Mifanilika ny samy mpitsara
Miteraka resabe eto Mahajanga ny namotsorana ireo jiolahy nosamborin’ny Polisy heverina fa tompon’antoka tamin’ny fandrobana ny Microcred. Araka ny loharanom-baovao akaiky ny Fitsarana dia tsy mbola vita akory ny raharaham-pitsarana fa mbola vao miandry tohin’ny ankety amin’izao fotoana izao ny raharaha.
Manana zo hitaky fahafahana vonjimaika (LP) ny voarohirohy, saingy tsy mbola nahazo izany, na efa nangataka aza izy ireo, tao amin'ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany (TPI) teto Mahajanga.
Noho io dia nampakatra ny raharaha tany amin’ny Fitsarana Ambony ireo izay voakasika ka tamin'ity farany no nangataka LP indray ireo voampanga, ka ny rantsa-piampangana tao amin’ny Cour d'Appel no namoaka ny fanapahana fahafahana vonjimaika ho an'izy efatra mirahalahy voalaza fa lohandohan’ny mpisorona tamin’ilay fanafihana banky Microcred Mahajanga farany teo iny.
lundi, 06 août 2018 16:33
Morondava: May ny biraon’ny Faritra, potika hatramin’ny lisi-pifidianana
Akoson’aratra (court-ciruit) vokatry ny fitarihana jiro amin’ny asa ataon’ny BNGRC no tombanana nitarika ny fahamaizan’ny biraon’ny faritra ny prefektioran’i Morondava.
Nanomboka tamin’ny roa tolakandro ny afo, ary adin’ny roa taty aoriana tsy mbola voafehy izany noho ny fitsokan’ny rivotra sy ny akora mora mirehitra nandrafetana ny trano, izay vita amin’ny hazo ny ankamaroany. Tsy manana “pompier” ihany koa ny Kaominina ambonivohitr’i Morondava.
Nisy ihany ny entana vitsy azo navotana, saingy izay tafavoaka nisy nanararaotra nangalatra toy ny ordinatera.
Izay tsy very dia simba, toy ny ordinateran’ny CED izay rantsan’ny Vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI) Distrikan’i Morondava, misy ny tahirim-baovaon'ny fifidianana izay hanontana ny lisi-pifidianana ho an’i Menabe manontolo.
lundi, 06 août 2018 15:42
Ambanja: Tonga ny gropy
Tonga ny zoma 03 aogositra teo ny gropy mpamokatra herinatry ny Henri Fraise, ho an'ny Jirama eto Ambanja.
Antenaina hamaha ny olona amin'ny famatsiana jiro, izay tena nijaliana tokoa aman-taonany teto Ambanja.
lundi, 06 août 2018 14:40
Venezuela: Nisy nanafika tamin'ny alalan'ny drone
Nandritra ny matso lehibe nataon'ny miaramila ny asabotsy 04 aogositra teo, rehefa nandray fitenenana ny filohan'ny Venezuela, Nicolás Maduro, dia nisy drone 2 nizotra ho eny amin'ny tribune, ny iray tsy tody fa nidoboka ary nipoaka tamin'ny rindrina, ny iray kosa tratran'ny brouillard radio nanodidina ny toeran'ny manam-pahefana ka nivily lalana ary nipoaka tamin'ny toeran-kafa.
Fantatra araka ny fanambaran'ny minisitry ny atitany veneziolianina, fa nisy baomba avokoa ireo drone roa ireo, baomba mampidi-doza ao anatin'ny faritra 50m.
Fito ny miaramila naratra ka nahiditra hopitaly.
lundi, 06 août 2018 14:39
Polyteknika Vontovorona: Miato mandritra ny fotoana tsy voafetra ny fampianarana
Izay no tapaka tamin'ny fivoarian'ny mpampianatry ny Polyteknika ny maraina teo, lany tamin'ny isa 48 sy 27, fa miato tanteraka ny fampianarana eny Vontovorona, ka anatin’izany ny mpandraharaha sy ny tompon'andraikitra rehetra (Mpampianatra vacataire, permanent, administration)
Hatramin’ny fanohanana voka-pikarohana aza miato avokoa, mandritra ny fotoana tsy voafetra.
lundi, 06 août 2018 10:07
Andrimitosy Lalandy: “Amin’ny 2038 i Rajoelina vao tokony hirotsaka hofidiana filoha »
Nambaran’ity injeniera fizisianina ity fa tsy tokony hirotsaka ho filoham-pirenena ny olona nanonagam-panjakana sy ireo nanorina fiangonana. Fahitana araka ny vavaka nataony kosa no nilazan’i Andrimitosy Lalandy fa amin’ny 2038 i Andry Rajoelina vao tokony hirotsaka hofidiana filoha.
Nilaza i Andrimitosy Lalandy fa ho kandida amin’ny fifidianana filoham-pirenena hatao amin’ny 7 novambra, ary hisy ny fampahafantarana izany hataony rahampitso.